China Gachn zuru servo Baby Diaper Machine / okenye diaper stacking ngụ igwe na - emeputa na ndị na - eweta ya | GACHN
lace nke Mmalite: China
Aha ika: Gachn
Ego pere mpe: 1 SET
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa: WOODEN CASES
Oge Mbuga ozi: 90-120 ỌR WOR Ọrụ
Usoro ịkwụ ụgwọ: L / C, T / T
Ike ọkọnọ: 10 SETS kwa ọnwa
Nkọwapụta Ederede Zuru Ezu
Achọrọ onye ahịa
Piece 600 / min
Ike nrụnye ::
Ihe dịka 20KW
Igwe eji akwa akwa akwa nwata
Ngụkọta na ịchekwa ọtụtụ 15-450 iberibe
Ọha nke ibe Ogologo: 180mm-260mm, ọkpụrụkpụ 8mm-15mm
Ogo igwe nha L3.6m × W3.3m × H2.2m
Ngwaọrụ Ike Ngwaọrụ 3Ph380Vac50HZ, usoro ụzọ anọ na-arụ ọrụ ụzọ anọ
Gụ na Speedgba Ọsọ 600pcs / min
Ngwurugwu ikuku: ikuku ikuku 0.5MPa
ikuku ikuku ï¼œ300L / min
Noise ụzụï¼œ85db (A)
Site na imeghari ngagharị Mitsubishi na Yaskawa na-achịkwa PLC na usoro ịkwọ ụgbọ ala n'obere ọrụ, ọ hụrụ na enwere njigide ziri ezi ma kwụsie ike.
Nyocha nke ọgụgụ isi, mgbe akụrụngwa ahụ mebiri na arụ ọrụ akụrụngwa mere, ọ nyere ndụmọdụ ịdọ aka na ntị dara ada
Nwee mbupụ mbugharị abụọ na ọdụ nke mbupụ mmiri, mgbe igwe nkwakọ ngwaahịa ahụ gbadara, otu ngwaahịa ga-ewepu n'ọdụ ụgbọ mmiri na-agbapụ.
1.Anyị na-enye aka ịhazi ụlọ ọrụ ndị ahịa, akara zuru oke na ịzụta ihe ma ọ bụ iduzi ya
2. Ọrụ na-esochi ngwaahịa: anyị ga - achọpụta gị ebe ngwaahịa a hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ.
3. Mgbe emechara nsonye: anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka ịzụ azụmaahịa akụrụngwa isi iyi n'efu.
4.Mgbanyeghị ụjọ: ngalaba ọrụ ndị ahịa ga - eme ihe ozugbo ha nata oku ọ bụla ma nye ndị nrụpụta ọrụ iji nyere gị akadozie nsogbu gị ozugbo enwere ike.
Ngwaọrụ eji aka eme:
Anyị nwere nnukwu ahaziri iche ma kee ya. Ngwaọrụ ọ bụla achọrọ emebere igwe nwere ike ịdị
haziri ma mepụta ya maka ịrụ ọrụ ọfụma na ọnụego ezi uche dị na ya, na-eme nke gị
usoro nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ nke ọma.
1- Anyị na-enye vidiyo na akwụkwọ ntuziaka iji gosi usoro nwụnye.
2- Anyị na-enye ọzụzụ maka nrụnye n'efu na ụlọ ọrụ anyị.
3- Anyị nwere ike izipu onye na-azụ ahịa n’ụlọ ọrụ ndị na-azụ ihe iji wụnye igwe ma nye ọrụ ọzụzụ.
Mgbe Ahịa Ahịa Ahịa:
1- akwụkwọ ikike izizi otu afọ na nkwado usoro ndụ n'efu.
2- a ga-eweta ihe ga-enyere onwe ya aka ma ọ bụrụ na igwe mebiri n'etiti oge akwụkwọ ikike.
3- Mgbe oge ikike ahụ gasịrị, a na-enye ndị ọzọ ihe maka ndochi dabere na ụgwọ ụfọdụ.
Ngwaọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ, ya na servo moto na PLC metụ aka, nke nwere ike ịhazigharị ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ, mbukota ya na ogologo anụ ahụ dịka ọ dị. Igwe a na-akwado usoro njikọta ọkụ eletrik, yana ọrụ nke sistemụ mkpọchi njehie yana akara ntuziaka maka nchekwa.
Asụsụ nke ihuenyo mmetụ ahụ nwere ike ịhazi nke ọma dịka onye na-azụ ya.
1year, mana njigide ndu gi
3.Ọ dị oke ọnụ na-eri nnukwu ego, oke arụmọrụ kwụsiri ike.
4.Adịghị nchara nchara anaghị adị mfe imeghachiri anụ na-esi ísì ụtọ.
5.The obosara na ogologo nke ngwugwu na nhicha mmiri nwere ike idozi dịka ịchọrọ.
Nkwakọ ngwaahịa site na ọkọlọtọ mbubata mkpanaka ma ọ bụ pallet osisi na akpa oghere nke dabara na njem ụgbọ elu dị anya ma chekwaa ya na iru mmiri, ịta ahụhụ wee rute ebe njedebe na-enweghị mmerụ ọ bụla.
1. A ga-anabata teknụzụ n'ụlọ ọrụ anyị ka ọ mụta otu esi eji igwe arụ ọrụ tupu nnyefe ya maka izu 1-2.
2.Aga n'ihu, igwe igwe gi no n’azu igwe gi, a ga-eziga ndi oru anyi n’ime nzuko omumita gi maka itinye, nwalee igwe na ikuzi ndi oru gi.
3. Otu afọ maka akwụkwọ ikike, ọrụ nyocha ọfụma, akụrụngwa dị mkpa enyere.
Otu akwụkwọ ikike maka otu igwe, ọrụ na-esochi afọ.
? 24 oru nkwado site na email.
? Ndi okacha-edozigha n’ulo na eweputa ndi nkuzi.
? Jiri Bekee mara mma maka sistemụ arụmọrụ.
1) .The ngwaọrụ nwere ezigbo nhazi, arụmọrụ kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, yana arụmọrụ ya dị mfe nnapụta.
2) .Ma igwe kọmputa na - ejikwa ọsọ nke ngwaọrụ a.
3) .Mara na OMRON photoelectric tracing system nke oke nkenke.
4) .Machie ebe edeputara ya ma dobe ya nma na aru oru nke akara ahu akara bu kwa otu osi di
nke dabara maka ọtụtụ ụdị ngwugwu ihe mkpuchi ahụ na-adị mma ma kwụsie ike.
5) .Mgbe mgbanwe nke ọsọ site na ntụgharị ugboro ole, oge agaghị enwe na mgbanwe ahụ.
6) .Ahụtọzuola ọrụ zuru oke nke usoro ndị a, nke bụ: ibelata ihe onwunwe, ihe eji akpụ akpụ,
nke; inye nri; mmiri ọgwụ (disinfector) spraying na packaging.
7) .Ọ nwere sistemụ okirikiri zuru oke na-ejikọ ọrụ nke ngosipụta nke ọdịnaya mmiri ọgwụ,
spraying, nchịkwa mmiri mmiri na-achịkwa mmiri, yana nchịkọta.
8) .Ma ọria mmiri ogwu nwere ike idozi ya site n’ozi n’efu.
9) .Mgbe ngwa nbipute koodu akwadoro, enwere ike ibipụta nọmba akara ụbọchị na-akpaghị aka.
Iji hụ na ịdị mma nke igwe nhicha mmiri anyị, Ndị ọrụ injin anyị na-elebara nkọwa nke akụkụ igwe ahụ anya. Anyị kwenyere na na mgbakwunye na ndị ọrụ nwere nkà, akụrụngwa dị mkpa maka ngwaahịa, nke nwere ike ịnabata arụmọrụ igwe ma belata ọnụego ọdịda.
Site na mmepe, mmepụta, nrụnye, ruo ụzọ iji nwalee, anyị na-ewere ndị ọkachamara ka ha me nyocha siri ike iji hụ na ngwaahịa ndị ahụ nwere ezigbo mma.
Nkwado Nzuzo tupu ị nweta ahịa:
1. Zaghachi na ọkachamara na-aza gị maka ajụjụ gị maka igwe na-ehicha mmiri.
2.Expert onye na-ere ahia ga-enye gị ndụmọdụ ọkachamara n’aka gị dabere n’ezie ịchọrọ maka nhazi nke igwe ndị ahụ
3.Mkwuputara ma kọwaa gi nke ọma mgbe ị bịarutere ụlọ ọrụ anyị maka ileta tupu nkwekọrịta
4.24 awa n’ọrụ ntanetị, 7 onebọchị izu asaa na - akwado gị ma ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla oru ma ọ bụ nsogbu gbasara igwe na - ede akwụkwọ mposi.
-Zụ Ahịa Mgbe Azụsịrị
1.Engineers esenidụt echichi na ọzụzụ, anyị niile injinia nwere ahụmịhe bara ụba maka na-arụ ọrụ esenidụt
2.Ikwenye gi ka inye gi ihe ndozi gi na onu di ala
igwe eji eme akwa nwa
akpaka stacking igwe
Nke gara aga: P nweta akwa nhicha ahụ na akwa panty na-agụta ọnụ na igwe eji etinye ihe
Osote: Mitsubishi Q170MCPU-S1 Machine Diaper Baby 600 pcs / min Igwe Ọsọ
Baby Diaper Machị
Igwe eji eji mkpị ọhụụ ọhụụ
Nwa diaper okenye diaper na - emechi onu ogugu ...
Ngwaọrụ Baby Dvoper Baby Servo zuru ezu
Machine Seria Baby zuru ezu / Baby Diaper St ...
Ngwaọrụ Baby Diaper zuru ezu / na-agụta m ...
GM-085N Baby Diaper Production Line L3.6mÃ — W3.3 ...
Nwa di elu na okenye diaper staging guru…